Iitattoos zentaba: intsingiselo kunye nokuqokelelwa koyilo | Ukuzoba
Iimpawu zeentaba, yintoni intsingiselo yazo?
UFernando Prada | | Iitatto ezinemilo
Nokuba phakathi kwabathandi bendalo okanye abo bathanda ukuhamba nokufumanisa iindawo ezintsha zomhlaba, i iiTatoo zasezintabeni Ziyilo loyilo oludumayo olukhulayo ngokucacileyo kumaxesha akutshanje. Olu hlobo lwe tattoo luye lubonakale ngokulula, ngakumbi kwiqela labantu abakhankanywe apha ngasentla. Ukuzola, ukoyisa okanye ukuthanda indalo, zezinye zeekhonsepthi ezifuna ukuzibonakalisa ngezi tatto.
Kweli nqaku libekelwe ngokukodwa iiTatoo zasezintabeni ungajonga ngokwahlukileyo iintlobo zoyilo, nangona imeko icacile. Namhlanje kusefashonini ukuthwebula iprofayili etsala intaba kwimbonakalo yomhlaba. Umvambo olinganiselweyo, ngakumbi kwimibala engwevu. Konke oku kulwandlalo oludlulisa ukuthamba kunye nokutya okumnandi. Isiphumo siyabonakala kwiso.
1 Intsingiselo yeetattoos zeentaba
2 Iifoto zeTattoos zeNtaba
Intsingiselo yeetattoos zeentaba
Masingene nzulu kwintsingiselo yezi tatto. Wakhe wakhwela entabeni? Xa sifika encotsheni sonke senza ngokufanayo, izandla akimbo esinqeni, sithatha umoya kwaye siyikhupha sithi: "Jonga ukuba unxibe ntoni", emva koko sijonga ngasemva ukubona esikoyisileyo kwaye Ndiziva ndinamandla ngakumbi, siziva sigcwele, titanicNjengokuba kungekho nto inokusiyekisa Siziva nje ayinakutshatyalaliswa kwaye ayinakunqandwa.
Eyona ntsingiselo ixhaphakileyo kukuthanda indalo. Umntu owenza iitattoo intaba yomhlaba uhlala ethanda indalo. Umntu othanda isenzo sodelo-ngozi, into engaziwayo kwaye ungoyiki nto. Intaba luphawu lwentlonipho ngokubhekisele kwinto esincedayo siphumle kwaye sicoce iingqondo zethu xa sikonganyelwe.
Ngapha koko, kwiinkcubeko ezininzi nakwiintsomi zamazwe apho imbonakalo yomhlaba ikhoyo ubukhulu becala ziintaba, kuthathwa njengolu vavanyo lwabantu abadala ukufikelela encotsheni yentaba okanye intaba kunye nokuzisa ubungqina bayo bokuqinisekisa inyathelo le ebuntwaneni ebomini bomntu omdala.
Yiloo nto itattoo yentaba eyenzelwe ukufuzisela. Umntu owenza umvambo imbonakalo yomhlaba yentaba, enyanisweni, inyani okanye isiganeko kubhalwe umvambo kuye kwafuneka oyise ngokusekwe umgudu, idini kunye neenyembeziIsikhumbuzo esingapheliyo se umzamo Utyalomali ekufikeleleni kwiinjongo zakho kwaye ungazilibali iziqalo zakho.
Enye intsingiselo edla ngokunikwa olu hlobo lweetattoo yile yozinzo. Umntu onentaba ebhalwe umvambo uhlala engumntu ozinzileyo oneenkolelo eziqinileyo zokuba, njengentaba, azinakushukunyiswa ngaphandle kweemeko ezibangqongileyo.
Intsingiselo esasazeke kancinci yile paz. Xa sikhwela encotsheni yentaba, sifumana ukuthula kunye "noxolo" oluvela kwingxolo yehlabathi ejikeleze izixeko ezikhulu kunye noxinzelelo esinalo mihla le ngenxa yendlela esiphila ngayo ngoku. Inkqubo ye- ukuhamba, ukuhamba, okanye nawuphi na umsebenzi onxulumene nokunyusa intaba uye waba kwifashoni kakhulu kule minyaka idlulileyo ngenxa yoku kuchazwe apha ngasentla.
Masithi ukuba i-gentrification apho iidolophu needolophu ezijikeleze amaziko amakhulu ezidolophini ziye zangena khona, kubangele ukuba uthando lwendalo kunye nemisebenzi enxulumene nayo ikhule ngokubalaseleyo. Ke ngoko, kuyinto eqhelekileyo ukuba ilizwe le tattoo lifunxwe yile wave kwaye iitatto zolu hlobo zikhulile, kuyo yonke imibutho yehlabathi.
Nangona iintaba ziyinto enokuthi ibandakanywe ngokulula kudidi lwe Iitattoos zomhlaba . Kwaye kunjalo, i Intsingiselo yeetattoos zeentaba inomdla kakhulu. Ngokuqinisekileyo sesinye sezizathu eziphambili ezikhokelela abantu ukuba bafumane le tattoo.
Iitattoo apho iintaba, amahlathi okanye imilambo ivela khona, zibonisa uthando lwendalo. Banxulunyaniswa noxolo nokuzola. Ingakumbi indlela esivakalelwa ngayo xa sisencotsheni yentaba ende. Ezinye iintsingiselo ekufuneka sizithathele ingqalelo zezi uxolo, ukuphucula, ukomelela kunye nokuzimisela. Iimpawu zokuba nabani na ufuna ukubonisa le tattoo.
Olu hlobo lweeTattoo lubonakala luluhle ngeendlela ezininzi nakwiindawo ezininzi zomzimba kodwa, njengesiqhelo, konke kuxhomekeke kuyilo esilifunayo. Ukuba sikhetha uyilo olunenkcukacha ezininzi, itattoo kuya kufuneka yenziwe kwi indawo enkulu kakhulu njenge ii-quadriceps okanye icala. Ukuba kwelinye icala, sikhetha a uyilo ngaphezulu kancinci minimalist singayenza ibe nye indawo yomzimba into encinci efana ne- isihlahla, ingalo okanye izandla.
Isishwankathelo, iintaba zinomthwalo onzima inkcubeko kwihlabathi liphela kunye noluntu Kwaye indalo yeetattoo iye yatsho lo mthwalo kwaye incede abaninzi ukuba banxibe le ndawo ibhalwe kulusu lwabo njengophawu lwento abanokuyenza ebomini.
Kule galari ilandelayo sikushiyele ezinye iifoto ukuze ufumane izimvo zoyilo lolu hlobo lwe tattoo kwaye uzenzele ezakho.
Iifoto zeTattoos zeNtaba
I tattoo yothando enomtsalane eneentaba.
Fuente". rel =" ibhokisi yokukhanya [igalari-1] ">
Ulwandle kunye ne tattoo yasentabeni ngasemva (Fuente).
Ulwandle kunye ne tattoo yasentabeni enobume beRhombus (Fuente).
I tattoo yendalo eneentaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Iimpawu zeentaba, yintoni intsingiselo yazo?
Uku tattoo ngokubandayo, ngaba kunokwenzeka okanye ndiza kubeka umngcipheko?
Iitoto zeScorpion ezineeroses: indibaniselwano engalindelekanga